ရခိုင်သို့ ဘင်္ဂါလီများပြန်ဝင်လာမည့်အရေး အစိုးရတင်မက နှစ်ဖက်အသိုင်းအဝိုင်းကပါ ညှိနှိုင်းဆေ?? - Yangon Media Group
ရခိုင်သို့ ဘင်္ဂါလီများပြန်ဝင်လာမည့်အရေး အစိုးရတင်မက နှစ်ဖက်အသိုင်းအဝိုင်းကပါ ညှိနှိုင်းဆေ??
ရန်ကုန်၊အောက်တိုဘာ ၁၃-ရခိုင် ပြည်နယ်သို့ ဘင်္ဂါလီများပြန်လည် ဝင်ရောက်လာမည့်အရေးကို အစိုး ရတင်မက နှစ်ဖက်အသိုင်းအ ဝိုင်းမှပုဂ္ဂိုလ်များကပါ တွေ့ဆုံ ညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်မှသာ ပြေလည် နိုင်မည်ဟု ငြိမ်းချမ်းရေးနှင့်တိုင်း ရင်းသားအရေးလေ့လာသူ ဦး မောင်မောင်စိုး ကပြောသည်။
အောက်တိုဘာ ၁၃ ရက် ရန်ကုန်မြို့ Yangon City Hotel တွင် ရခိုင်ပြည်နယ်အကျပ်အ တည်း ဘယ်လိုအဖြေရှာမလဲ ခေါင်းစဉ်ဖြင့်ပြုလုပ်သည့် ဒီဘိတ် တွင် ¤င်းကအထက်ပါအတိုင်း ပြောသည်။
”အခုက ဟိုဘက်နိုင်ငံထွက် သွားတဲ့သူတွေ ပြန်ဝင်လာမယ်၊ နေရာချထားပေးမယ်၊ ပိုင်ဆိုင်မှု ပြဿနာတွေကို ဖြေရှင်ပေးရမယ် ပေါ့။ အတူပြန်လည်နေထိုင်ရမယ့် နှစ်ဖက်လူတွေမှာ သံသယတွေရှိ နေတယ်၊ ထို့အတွက် ယခုဖြစ်စဉ် ကို အစိုးရသာမက နှစ်ဖက်လူ့ အဖွဲ့အစည်းမှပုဂ္ဂိုလ်များ ဆွေး နွေးပါဝင်မှုရရှိပြီး မည်ကဲ့သို့ဆက် လက်နေထိုင်မည်ကို ဆွေးနွေး အဖြေရှာသင့်ပါတယ်”ဟု ငြိမ်း ချမ်းရေးနှင့် တိုင်းရင်းသားအရေး လေ့လာသူ ဦးမောင်မောင်စိုးက ပြောသည်။
ဘင်္ဂလားဒေ့ရ်ှသို့ရောက်ရှိ နေသော ဘင်္ဂါလီများအနေဖြင့် မြန်မာနိုင်ငံကို ပြန်ဝင်လာပါက မည်ကဲ့သို့ထူးခြားလာမည်လဲဆို သည့် စိုးရိမ်သောကနှင့် ယခင် ၄င်းတို့ပိုင်ဆိုင်မှုများအပေါ် မည် သို့သဘောထားမည်လဲဆိုသည့် သောကတို့ရှိနေကြောင်း ကမန် အမျိုးသားတိုးတက်ရေးပါတီအ တွင်းရေးမှူး ဦးတင်လှိုင်ဝင်းက ပြောသည်။
”နိုင်ငံတကာက ဖိအားတွေ နဲ့ မြန်မာနိုင်ငံမှာဖြစ်နေတဲ့ ပြဿ နာကိုဖြေရှင်းတာ နည်းလမ်းမမှန် ဘူးမြင်တယ်၊ ကုလသမဂ္ဂ နောက် ဆုံးအစီရင်ခံစာက ပြစ်တင်တာ ပါ။ ဒီလိုပြစ်တင်နေမယ်ဆိုလို့ရှိရင် နယ်စပ်မှာရှိတဲ့ ဒီဒုက္ခသည်ပြဿ နာက နောက်နှစ်ပေါင်းများစွာကြာ သွားလိမ့်မယ်”ဟု ဦးမောင်မောင် စိုးက ပြောသည်။
ယင်းအပြင် ဘင်္ဂါလီများထဲမှ ဖြစ်သင့်ဖြစ်ထိုက်သူများကို နိုင် ငံသားဖြစ်ခွင့်ပေးပြီးပါက နိုင်ငံ သားတစ်ဦး၏အခွင့်အရေးကိုလည်း အပြည့်အဝပေးသင့်ကြောင်း၊ သို့ သော်၊ တိုင်းရင်းသားဖြစ်ခွင့် ကိစ္စ မှာမူ မဖြစ်သင့်ကြောင်း ¤င်းက ပြောသည်။
ရခိုင်ပြည်နယ်တွင် ပဋိပက္ခ ဖြစ်ခြင်းကြောင့် ဒေသခံများ၏လုပ်အား၊ အရင်းအနှီးများဆုံးရှုံးမှု ဖြစ်ပေါ်ပြီး ပြည်နယ်ကိုဆင်းရဲ မွဲတေမှုဖြစ်ပေါ်စေကြောင်း ဒီမို ကရေစီနှင့် လူအခွင့်အရေးပါတီ ဥက္ကဋ္ဌဦးကျော်မင်းကပြောသည်။
ရခိုင်ပြည်နယ်အတွင်းနေ ထိုင်သည့် ဘင်္ဂလီများအနေဖြင့် သီးခြားနယ်မြေတစ်ခုရှိရန် တောင်း ဆိုနေခြင်းမဟုတ်ကြောင်း၊ ရခိုင် ပြည်နယ်အတွင်း လုံခြုံလွတ်လပ် စွာဖြင့် အများနည်းတူ တန်းတူ နေထိုင်နိုင်ပါက ကျေနပ်သည့် အုပ်စုသာဖြစ်ကြောင်း ဘင်္ဂါလီ တစ်ဦးချင်းစီအလိုက် မြန်မာ နိုင်ငံ၌ မျိုးဆက်သုံးဆက်နေထိုင် ခဲ့သည့်အထောက်အထား လဝက မှတ်တမ်းများကိုရှာဖွေကာ နိုင်ငံ သားဖြစ်ခွင့်ပေးခြင်းကို အစိုးရ တာဝန်ယူဆောင်ရွက်ရမည်ဖြစ် ကြောင်း ၄င်းကပြောသည်။
”ဘာအထောက်အထားမှမ ရှိတဲ့သူတွေကို လုံးဝလက်မခံပါ နဲ့။ ကျွန်တော်တို့ပါဝိုင်းပြီး ကန် ထုတ်မယ်”ဟု ¤င်းကပြောသည်။
ရခိုင်သမိုင်းသုတေသီ ဦး ထွန်းမြင့်က ရခိုင်ပြဿနာမှာ နိုင် ငံတကာကစောင့်ကြည့်နေခြင်း ကြောင့် အစိုးရအနေနှင့် နိုင်ငံ တကာလေးစားပြီး လက်ခံနိုင် လောက်သော အဖြေမျိုးရအောင် တဖြည်းဖြည်းဖြေရှင်းနေသည်ဟု ယူဆကြောင်းပြောသည်။
”တော်တော်လေး ကြာနိုင်ပါ တယ်၊ နှစ်နဲ့ချီနိုင်ပါတယ်၊ ဒါကို အစိုးရက ကျွန်တော်တို့ တစ်နိုင် ငံလုံးက ယခုထက်ပိုမိုနားလည် နိုင်အောင် ရှင်းလင်းအောင်ချပြ သင့်တယ်လို့ ပြောချင်ပါတယ်”ဟု ¤င်းကပြောသည်။
ကိုဖီအာနန်အကြံပေးအဖွဲ့ ဝင်ဟောင်း ဦးအေးလွင်က သတင်းအချက်အလက်များကို သွက်သွက်လက်လက် အချိန်နှင့် တစ်ပြေးညီပေးနိုင်ဖို့လိုကြောင်း၊ ဌာနေပုဂ္ဂိုလ်များအနေနှင့်လည်း တစ်ဖက်က ဝင်လာသူများထဲတွင် အကြမ်းဖက်သမားများပါ လာ မည်ကိုကြောက်နေကြောင်း ပြော သည်။
ဆယ်လီနာဂိုးမက်ဇ် နာမကျန်းမှုကြောင့် စိတ်ရောကိုယ်ပါထိခိုက် သူငယ်ချင်းများနှင့် မိသားစုက ဝ?
စစ်ပွဲရပ် ကဗျာရွတ်ပွဲနှင့် ပတ်သက်ပြီး တရားစွဲ ခံထားရသူများကို ရုံးထုတ်၊ ငြိမ်းချမ်းရေးဆွေ